မွေးနေ့မှာ မိဘတွေကို ကတိပေးလိုက်တဲ့ စည်ဖြိုး | Duwun
ဒီနေ့က စည်ဖြိုးရဲ့ မွေးနေ့ပါ။
ဒီနေ့ဟာ သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ မိခင်နဲ့ ဖခင်တို့ကို ထိုင်ကန်တော့ရင်း ကတိတစ်ခု ပေးခဲ့ပါတယ်။
Photo: စည်ဖြိုး FB
ဒီနေ့(စက်တင်ဘာ၄ရက်)က သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုးရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ ဆိုးခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ လက်ဖျားနဲ့တောင်မထိခဲ့ပဲ အကျိုးအကြောင်း နိယာမ တွေနဲ့ တရားရေအေးတိုက်ကျွေးရင်း ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးတွေကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
"ဒီကနေ့မနက် ၁နာရီ. မှာလူ့လောကထဲ အသက်လုခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး.။ စည်ဖြိုးဆိုတဲ့ ဒီရုပ်နာမ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တယ်။ အမှားတွေကို အတွေ့ကြုံအဖြစ် သင်ခန်းစာအကြိမ်ကြိမ် ယူခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာ လည်း သားဆိုးသမီးဆိုးပစ် ရိုးထုံးစံမရှိတဲ့အတိုင်း ညီအကိုနှစ်ယောက် လုံးမလိမ္မာ အခါခါမိုက်ခဲ့ကြတုန်းကလည်း .လက်ဖျားနဲ့တောင်မထိခဲ့ပဲ အကြောင်းအကျိုးနိယာမတွေနဲ့ တရားရေအေးတိုက် ကျွေးရင်း တစ်ချိန်က ဆန်ကုန်မြေလေး ကိုပြုပြင်ပြေင်းလဲပေးခဲ့တယ်." ဆိုပြီး စက်တင်ဘာ(၄) ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ စည်ဖြိုး
စည်းဖြိုးဟာ လူ့လောကထဲကို အသက်လုခေါ်ဆောင်ပေးပြီး သူ့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ မိခင်နဲ့ ဖခင်ကို ကန်တော့ရင်းကတိတစ်ခုကို ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
"ဒီကမ္ဘာလေးရကျိုးနပ်အောင်.. မွေးရကျိုးနပ်အောင်. အကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းကောင်းသိပြီး အများကောင်းကြိုး သယ်ပိုးသွားရင်း အကြောင်းကောင်းနိုင်သမျှကောင်း အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လိုကတိပေးရင်ရှိခိုးဦးချကန်တော့လိုက်ပါတယ် ။မေကြီးနဲ့ဖေကြီး ❤️" ဆိုပြီး မိခင်နဲ့ ဖခင်တို့ကို ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
စည်ဖြိုးဟာ လက်ရှိမှာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှု ပြုုလုပ်နေပေမယ့်လည်း ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ရွေးချယ်ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ စည်ဖြိုးဟာ "အလင်းထဲကလူ "အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့သော လပိုင်း လောက်ကလည်း ဒါရိုက်တာ စတီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ""နိုင်ငံကြီးသား" ရုပ်ရှင်ဇာတ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ နေထက်လင်း၊ နေမျိုးအောင်၊ ဇင်ဝိုင်း၊ မောင်သီ၊ ထူးခြား၊ မိုးယံဇွန်၊ မင်းသွေး၊ စည်ဖြိုး၊ ထွန်းကိုကို၊ နေရဲ၊ သိန်းလင်း၊ ရွှေသမီးနဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့က အဓိက ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။